March 6, 2018 – Thutastar
မိန်းကလေး များ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ)
Comments Off on မိန်းကလေး များ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ)
မိန်းကလေးများ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ ) ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ.သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ ကျောင်းသင်ခန်းစာဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အချိန်အကုန်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူကျက်မှတ်ရပါတယ်. ဘ၀နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ နေ မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်က အဲ့ ဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့.. ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ အလကားရတဲ့ အမြတ်ပေါ့နော်… ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအလကားရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်.. မနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ ကောင်မလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ နယ်ကနေလာပြီးဘန်ကောက် မြို့ ပေါ်မှာကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ့ Online ပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. နောက်တော့ချစ်သူအမေရိကန်ိန်င်ငံသားက ဘန်ကောက်ကိုအလည်ရောက်လာပါတယ်.. အတူသွားအတူအတူတူနေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗီဇာသက်တန်းကုန်တော့အမေရိကားကိုပြန်ရတော့မှာမို့ ကောင်မလေးက မပြန်ခင်သူမကို တရားရုံးမှာ ဇနီးမယားအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးသွားပါလို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်လေးက သူလက်မှတ် မထိုးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ သူ့ မှာဇနီးရှိပါတယ်
ဘုရင့် ရဲ့ စွဲလန်းမှုရဖို့ မိဖုရား တွေ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲ
Comments Off on ဘုရင့် ရဲ့ စွဲလန်းမှုရဖို့ မိဖုရား တွေ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲ
ရှေးခေတ်က ဘုရင်ရဲ့ မိဖုရားဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရင်လည်း ဘုရင့်စွဲလန်းမှုရဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရပါတယ်။မောင်းမမိဿံတွေများစွာရှိတဲ့အထဲ မိဖုရားကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်ဖို့ဆိုတာ မိဖုရားတွေအတွက် အထူးတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ မိဖုရားချင်းအလှပြိုင်မှုက တချိန်က နန်းတွင်းမှာ တကယ့်ကို အင်အားကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ အလှအပအတွက် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1.Rani Padmavati ဆိုတာ တချိန်က Chittorgarh ဘုရင်ရဲ့ အသည်းစွဲမိဖုရားဖြစ်ခဲ့ပြီး သူဟာ အလှအပနဲ့ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောခဲ့ပါတယ်။သူမကို လိုချင်လို့ Alauddin Khilji က ဘုရင်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး သူမကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2. သူတို့ အလှအပဆိုတာလည်း လျှို့ဝှက်ချက်တချို့ရှိနေပါတယ်။ဘုရင်ဟာ သူတို့အပေါ် စိတ်တိမ်းညွှတ်အောင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ချစ်စဖွယ်အမူအရာကို လုပ်ယူရတာဖြစ်ပြီး နေပုံထိုင်ပုံက ဘုရင် စွဲလမ်းနိုင်လောက်တဲ့ ပုံစံဖြစ်အောင် မိန်းမထိန်းကြီးတွေဆီက သင်ယူရပါတယ်။မိဖုရားတွေဟာ ဒါတင်မကပဲ သူတို့ရဲ့ အလှအပနဲ့
Comments Off on ခေတ်အလိုက် အရေးပါလာတဲ့အရွယ်အစား
ခေတ်အလိုက် အရေးပါလာတဲ့အရွယ်အစား ဟိုးအရင်ကတော့ ၄ လက်မ ဆိုတာ ပုံမှန် ဆိုက်ပ ယောင်္ကျားလေး ကော မိန်းကလေး ကောလူကြီးရောလူငယ်ရော အဆင်ပြေတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကျတော့ ပို ပွင့်လင်း ပြီး အမြင် ကျယ်လာ ကြတော့ ၄ လက်မ ခွဲ လောက်ဆိုတာ သေးတယ် ထင်လာ ကြတယ် ။ အနဲဆုံး ၅ လက်မ ခွဲ ၆ လက်မ လောက် မှ အားရတယ် လို့ ထင်လာ ကြတယ် ။ တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေ ကြတော့ ၆ လက်မ က ကြီး လွန်းတယ် ။ လက်နဲ့ မဆန့်ဘူး ပေါ့ ။ ၅
Comments Off on သီရိလင်္ကာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းနဲ့ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများ အခြေအနေ
သီရိလကာင်္နိုင်ငံ ကန္ဒီခရိုင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူဆလင် အသိုင်းအ၀ိုင်း နှစ်ခုကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ဒီကနေ့မှာတော့အစိုးရက နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ၁၀ ရက် သတ်မှတ်ကြေညာထားပါတယ်။ အများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ လူနည်းစု မူဆလင်တွေကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကန္ဒီ ခရိုင်တွင်းမှာတော့ ချက်ချင်း ညမထွက်ရ အမိန့် ကြေညာပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက စာသင်သား ရဟန်းတွေနဲ့ သီလရှင်တွေ ရာနဲ့ချီ ရှိနေတဲ့ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံတွင်း လုံခြုံရေး နောက်ဆုံး အခြေအနေကို မသိင်္ဂီထိုက် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ သီရိလကာင်္ နိုင်ငံ ကန္ဒီ ခရိုင်တွင်းက တေဒေနိယမြို့မှာ အများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ အနည်းစု မူဆလင် လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ
ငွေပေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး လူ(၃၀၀၀)ကျော်ဝိုင်းလာလို့ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရ
Comments Off on ငွေပေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး လူ(၃၀၀၀)ကျော်ဝိုင်းလာလို့ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ နာမည်ရထားတဲ့ ဘလော့ဂါအမျိုးသမီးဟာ အမျိုးသားတွေကို စွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့ ဟိုဒင်းဟိုဝှါကိစ္စ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး အခမဲ့ဆိုပြီး ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာကြောင့် သူမကို လူအများက အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး သူမ တည်းခိုနေထိုင်ရာ Wanda Hilton Hotel အခန်းအမှတ် 6316 မှာ လူပေါင်းထောင်ချီ တံခါးကို လာခေါက်လို့ သူမခမျာ ရဲရဲမအိပ်ရဲရှာပါဘူး။ အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့အမည်မှာ Mouyi မိုယီလို့အမည်ရပြီး၊ သူမကို ရဲကလည်း ပြည့်တန်ဆာတရားမဝင်လုပ်ကိုင်တယ်ဆိုပြီး Sanya Phoenix International Airport လေဆိပ်မှာ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ယီဟာ သူမရဲ့ ပို့စ်ကို ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး၊ “နောက်တာပါ”လို့ လျောချခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဟီနန်ကျွန်းစု၊ ဆန်ညာမြို့ရရှိ ဟိုင်တန်ပင်လယ်ကွေ့က ဟော်တယ်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အအိုဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဖတ်ရင် ရင်ထုမနာဖြစ်မှာစိုးလို့အပျိုစစ်စစ် မိန်းခလေးများသာဖတ်ရန်ဆိုတဲ့ စာ
Comments Off on အအိုဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဖတ်ရင် ရင်ထုမနာဖြစ်မှာစိုးလို့အပျိုစစ်စစ် မိန်းခလေးများသာဖတ်ရန်ဆိုတဲ့ စာ
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုးမထင်နဲ့ အုံး အအိုဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဖတ်ရင် ရင်ထုမနာဖြစ်မှာစိုးလို့ နော်အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက ခုခေတ်က ၁၆ နှစ်၁၇နှစ်ဆိုရင်ကို ရည်းစားက ရှိနေကြတာ ။ ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြားဘူး living together က နေနေကြပြီလေတကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီအပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို့ တောင် တင်စားထားကြပါတယ်။အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့ က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့ က ရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကိုထိန်းသိမ်းပါ။ ချစ်သူကို နားလည်အောင် သူသဘောပေါက်အောင် ပြောပြထားပါ။ ဒါမှ သူဘက်က လက်မခံဘူး ။ စိတ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရဲရဲကြီးသာ လမ်းခွဲလိုက်ပါ။သူ
ဒီနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေသဲသဲလှုပ်နေတဲ့ ကောင်လေး
Comments Off on ဒီနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေသဲသဲလှုပ်နေတဲ့ ကောင်လေး
“အမျိုးသမီးလေးတွေဝန်းရံနေကြတဲ့ မင်းသမီးသန်းသန်းစိုးရဲ့ချစ်သားလေး “ အနုပညာလောကထဲက မော်ဒယ်မင်းသားလေးရှင်မွေလ ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရှင်ေမွလကိုတော့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာလဲ မြင့်မြတ်နဲ့တူတဲ့ အနုပညာရှင်လေးတစ်ယောက်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကမှတ်ချက်ပေးထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်မွေလကတော့ ပရိတ်သတ်တွေအားပေးနှစ်သက်ကြတဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သန်းသန်းစိုးရဲ့ သားလိမ္မာလေးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။မေမေချစ်တဲ့သားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရှင်မွေလဟာဆိုရင်လည်း လတ်တလောမှာ ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားလေးတွေများစွာကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ တက်သစ်စမင်းသားလေးတစ်လက်ဆိုလဲမမှားပါဘူး။ လတ်တလောလေးမှာဆိုရင်လည်း ရှင်မွေလဟာ ချစ်မေမေသန်းသန်းစိုးနဲ့ ရှုတင်တစ်ခုမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်နူးစရာကောင်းလှတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အားကျနေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေလဲများစွာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သားတစ်ယောက်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ မိခင်မေတ္တာနဲ့ မိခင်တစ်ယောက်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ သားတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်မေတ္တာတရားလေးတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ photo credit Myanmarload အနုပညာလောကထဲက မျောဒယျမငျးသားလေးရှငျမှလေ ကတော့ ပရိတျသတျတှနေဲ့ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျလို့ထငျပါတယျ။ရှငျေမှလကိုတော့ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာလဲ မွငျ့မွတျနဲ့တူတဲ့ အနုပညာရှငျလေးတဈယောကျဆိုပွီး ပရိတျသတျတှကေမှတျခကျြပေးထားတာလဲဖွဈပါတယျ။
သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ရ ယမင်းကိုကို ရဲ့T&Y ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ခြင်း နှင့် သူမဘ၀အကြောင်းစုံ
Comments Off on သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ရ ယမင်းကိုကို ရဲ့T&Y ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ခြင်း နှင့် သူမဘ၀အကြောင်းစုံ
တချိန်က Miss Christmas 1997အလှမယ်‌ အဖြစ် နာမည်ကြီးကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ယမင်းကိုကိုတစ်ယောက် နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့ သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် သာသနာနုဂ္ဂဟ ဘွဲ့တံဆိပ်ရ လူပုဂ္ဂိုလ် ၅၇ဦး တို့အား ဘွဲ့တံဆိပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ရာ အဆိုပါဘွဲ့ကို ယမင်းကိုကို ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သတင်းကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့က တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ တစ်ချိန်က ကိုယ်လုံးလှလှလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ယမင်းကိုကိုက အနုပညာလောကမှာ အထိုက်အလျှောက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရရှိခဲ့သူပါ။ သူမဟာ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုစာ ပျောက်သွားခဲ့ပြီး ယခု နိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ရရှိမှသာ ပရိသတ်တွေက ပြန်လည်တွေ့မြင်ရတာပါ။သူမဟာ သုဓမ္မမဏိဇောတဓရဘွဲ့ရ ဦးသက်ဆွေ
Comments Off on အံ့သြစရာကောင်းလောက်အကြံကောင်းတဲ့ ပျား
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အကြံကောင်းတဲ့ ပျား ကျွန်တော်ကျိုင်းတုံ မြို့ကိုအလည်သွားရင်းနဲ့ ညပိုင်းမှာရပ်တော်မူဘုရားဆင်းတုတော်ကြီး သွားဖူးရင်း ဆင်းတုတော်ကြီးမှာ စွဲနေတဲ့ ပျားအုံတအုံကို တွေ့လိုက်ပါတယ်.. အဲ့ပျားအုံကိုတွေ့ပြီး စိတ်ထဲမှာ အတွေးတွေ တစီတန်းကြီးပေါ်လာပါတယ်.. ဟာာ..ဘုရားဆင်းတုတော်မှာ ပျားစွဲတာ ဘာထူးဆန်းလို့လည်းဗျာ..လို့ ပြောရင်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်.. ဘုရားဆင်းတုတော် ပျားစွဲတာကို တွေ့ပြီး တွေးမိတာကတော့..ဘုရားဆင်းတုတော်မှာ ပျားစွဲတာမြင်ရလို့ လဒ်ပွင့်မှာတို့ အတိတ်နမိတ်ကောင်းတယ်တို့ ဆိုတဲ့ ပေါကြောင်ကြောင် အတွေးတော့မဟုတ်ပါဘူး ပျားနေရာကနေဝင်ပြီး စဉ်းစားမိတာလေးကို ပြောပြချင်လို့ပါ.. အဲ့ရပ်တော်မူဆင်းတုတော်အနီးနားမှာ.ပျားအုံစွဲဖို့ သစ်ပင်တွေ အများကြီးရှိပါတယ.်.. အနီးနားက သစ်ပင်တွေမှာ ပျားအုံစွဲလိုက်ရင် လေဒဏ် မိုးဒဏ် သက်သာမဲ့ အပြင် အပူဒဏ် ပါသက်သာပြီး အရိပ်အာဝါသအောက် သစ်ပင်ရဲ့ ကိုင်းတွေမှာ ခိုင်မြဲစွာ.ပျားအုံကိုရှိ စေမှာပါ… ဒါပေမဲ့ ပျားက အနီးအနားတွေက သစ်ပင်မှာ သူတို့ရဲ့ပျားအုံကိုမစွဲပဲ လွင်တီးခေါင်ကြီးမှာ
မိန်းမ​တွေဆိုတာ ….. ????
Comments Off on မိန်းမ​တွေဆိုတာ ….. ????
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ် ။ အသင့် အိပ်ပျော်နေ ရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေး ရဲ့ နူးညံ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် သေချာ ကြည့်နေရင်း ကနေ အတွေး တစ်ချို့ ဝင်လာပြီး ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော် တွေးနေ မိတယ် ။ မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လို ပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင်က မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု အောက်မှာ နေပြီး ကြီးပြင်း လာခဲ့တယ် ။ အခုကြ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တရက်မှာပဲ သိတောင် မသိထားတဲ့ သူစိမ်း